Hetauda Khabar - कम्प्युटर तालिमको नाममा हरेक संग ५०० उठाइयो, तर गढी गाउपालिकाले दिएन तालिम
मकवानपुरको गढी गाउँपालिकाको कार्यालय मातहतको सामाजिक विकास साखाबाट संचालित अपांग समन्वय समितिले गाउँका केहि स्थानीयलाई झुक्याएको पाइएको छ ।
समितिले २०७५ भदौ १ गतेबाट वडा नम्बर ३ मक्रान्चुलीका स्थानीय ४० जनालाई निशुल्क कम्प्युटर सम्बन्धि तालिम दिने भन्दै १ सय ४३ जना संग प्रति व्यक्ति ५०० का दरले रकम उठाएर तालिम पनि नदिएको र पैसा फिर्तापनी नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । गढीगाउपालिका र सिटीईभिटी अन्तर्गतको हेटौडाको हाम्रो प्रशिक्षण तालिम केन्द्रको समन्वयमा कम्प्युटर तालिम दिने भन्दै रकम उठाईएको थियो । तर शुल्क उठाउने अपांग समन्वय समितिले आज सम्म न स्थानीयलाई कम्प्युटर सम्बन्धि तालिम दिएको छ, न पैसा नै फिर्ता गरेको छ । यो हेर्दा गाउँका स्थानियलाई गाउँपालिकाले नै झुक्याएको देखिन्छ । 'हामीलाई कम्प्युटर सम्बन्धि तामिल दिन्छ ५०० शुल्क लाग्छ भन्दै फारम भराएर पैसा चै लिए तर तालिम पनि दिएनन्, आज सम्म पैसा पनि फिर्ता गरेनन्, ' नाम नबताउने शर्तमा एक महिलाले भनिन् ।
उता अपांग समन्वय समितिका सचिव बिष्णु चौंलागाईलाई हामीले फोन गरेर तपाइले स्थानीयलाई ठगेकै हो ? भनि सोध्दा उनले अक्मकिदै भने, 'हामीले तालिम दिने भनेका थियौं अलिकति ढिला भो, अब चाडैनै संचालन गर्ने कुरो भाको छ, सिक्न नचाहनेलाई पैसा फिर्ता दिन्छौं पैसा लिन कोहि आउनुभएको छैन' ।
हामीले गढी गाउँपालिकाका प्रमुख बिदुर हुमागाईंलाई फोन गरेर सोध्दा यसबारे आफु बेखबर रहेको बताए । कम्प्युटर सम्बन्धि तालिमको लागि बजेट चाहियो भन्ने कुरो आएको थियो, मैले पहिले तालिम दिनुस अनि पछी हामि सहायोग गरौंला भनें, कसले कति पैसा उठायो मलाई थाहाछैन हुमागाईंले भने ।
पैसा तिरेको ३ थरी रसिद
स्थानीयसंग तालिमको फारम शुल्क बापत प्रतिव्यक्ति ५०० उठाएको अपांग समन्वय समितिले दिएको रसिद ३ थरि भेटिएको छ । यो हेर्नुस ।
एउटा रसिद नेपाल रोजगार तथा सिपमुलक तालिम केन्द्र हेटौडा ४ को रसिद छ भने अर्को आइटी सेविंग फन्डको रसिद छ । त्यस्तै आइटी सेविंग कै केहि रसिदमा हाम्रो प्रशिक्षण तालिम केन्द्रको छाप लगाइएकोको छ भने केहीमा छैन । यहि रसिदबाट पनि थाहा हुन्छ कि गाउँका सोझा स्थानीयलाई झुक्यौनै खोजिएको हो । रसिदका बिषयमा अपांग समन्वय समितिका सचिव बिष्णु चौंलागाईलाई बुज्दा रसिद काट्नेबेला आफुले हाम्रै रसिद दिउँ भनेको तर साथीहरुले केहि फरक पर्दैन भनेर हाम्रो प्रशिक्षण केन्द्रकै रसिद दिएको बताउछन् ।
उता हाम्रो प्रशिक्षण केन्द्र हेटौडाका प्रमुख श्याम अग्रवाललाई यी दूई नामका तपाइसंग रसिदहरु छन् ? तपाइहरुकै हो ? भनि सोध्दा सोझै दुइटै होईन भने । जबकी आइटी सेविंग फन्डको केहि रसिदमा हाम्रो प्रशिक्षणको छाप लगाइएको छ ।
त्यसैले यहाँ हाम्रो प्रशिक्षण तालिम केन्द्रले पनि झुट बोलेको छ ।
के हुन्छ स्थानियको पैसा ?
कम्प्युटर तालिम लिनका लागि १४३ जनाले फारम भरेको अपांग समन्वय समितिका सचिव बिष्णु चौंलागाईले बताएका छन् । १४३ जनाको ५०० का दरले ७१ हजार ५ सय हुन्छ । चौलागाईंले १५ जनाले भने फारम मात्र भरेको पैसा नदिएको बताउछन् । हामि संग कुरा गर्दा चौंलागाईले पैसा फिर्ता लिन आउनेलाई फिर्ता दिने बताएका छन् ।
यसरी गाउँपालिका मातहतको समितिले स्थानीयलाई झुक्याउनु र आज सम्म पनि रकम फिर्ता नदिनु लज्जास्पद कुरो हो । यो सोझै ठग्न खोगेको जस्तो देखिन्छ, उता गाउपालिका अध्यक्ष भने बेखबर छन् ।